Topic: Sexy singer Indira Joshi in music video modeling
Author Topic: Sexy singer Indira Joshi in music video modeling (Read 6310 times)
« on: July 06, 2014, 08:03:17 AM »
Popular singer Indira Joshi has modeled inamusic on her own voice. The music video titled ‘Rakshi Gilinma …’ features the voice of Indira and Laxu Niraula. The comedy themed song is written by Mahesh Gyawali. UPDATE: an interview of the singer in TTV: On Saturday, the music video of the song was shot <a href='http://xnepali.net/fashion/sexy-singer-indira-joshi-in-music-video-modeling/' class='excerpt-more'>[...]</a>
Source: Sexy singer Indira Joshi in music video modeling
** From Fashion and Model blog ***
Well... Every dog has his day
Re: Sexy singer Indira Joshi in music video modeling
« Reply #1 on: July 06, 2014, 03:59:19 PM »
indira .jpg (39.79 kB, 454x680 - viewed 213 times.)
indira joshi singing.jpg (71.23 kB, 1200x800 - viewed 199 times.)
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. [Anon]
« Reply #2 on: October 30, 2015, 02:23:44 PM »
आश्विन ८, २०७२- जब उनी स्टेजमा उक्लिन्छन्, वातावरण रंगीन बन्छ । उनको ग्ल्यामरस गेटअप, लोभलाग्दो पर्फमेन्स तथा लयात्मक ध्वनिले दर्शकमाझ उथलपुथल नै ल्याइदिन्छ । त्यसैले पनि ‘उध्रेको चोली’ की यी गायिका कन्सर्टका निम्ति ‘हटकेक’ बनेकी छिन् ।
स्टेजमा इन्दिरा जोशीको जुन चमकदमक छ, निजी जीवनमा त्यसको प्रतिछायाँसम्म देखिँदैन । उनी सादा छिन् । सामान्य खानपान, सामान्य पहिरन, सामान्य दिनचर्या । इन्दिरालाई यस्तै जीवन स्वीकार्य छ । बिहान ६ बजे उठ्यो, रियाज गर्‍यो, गीत स्वरबद्ध गर्‍यो अनि साँझ घर फर्कियो । यही उपक्रममा उनको एक दिन बित्छ । खानामा विशेष ‘च्वाइस’ छैन, न त पहिरनमै । ‘सामान्य दाल, भात, तरकारी भए पुग्छ,’ इन्दिरा भन्छिन्– ‘घरमा जे पाकेको छ, मज्जाले खान्छु ।’
तराईमा जन्मी हुर्किएका उनलाई अलि मीठो खानुपरे रोटी चाहिन्छ । चिकेन ग्रेभीको स्वादमा पनि उनको जिब्रो लोभिएको छ । यद्यपि अहिले उनले धेरै चिल्लो वा मसलेदार खानामा कटौती गरेकी छिन् । ‘पहिले बाहिरको खाना मीठो लाग्थ्यो,’ इन्दिरा भन्छिन्– ‘अहिले खानामा उति आशक्ति छैन ।’
खाना जस्तै पहिरनमा पनि उनको खास आशक्ति छैन । जिन्स, टिसर्ट तथा फ्ल्याट सुज भए पुग्छ । अक्सर साथमा ह्यान्ड ब्याग, नाडीमा कुनै ब्रान्डको घडी र आँखामा गगल्स छुट्दैन । औपचारिक कार्यक्रम एवं कन्सर्ट छ भने सेतो रंगको सर्ट, पाइन्ट वा पेन्सिल स्कर्टमा ठाँटिन्छन् । ट्रेडिसनल आउटफिटमा साडी वा कुर्ता–सुरुवाल पनि मन पर्छ । गरगहनामा उति रुचि छैन । ड्रेसअप र मेकअपका लागि २० मिनेट पर्याप्त हुन्छ । कन्सर्ट वा सांगीतिक कार्यक्रम नभएको अवस्थामा उनको दैनिकी नियमित हुन्छ ।
उनी बिहान ६ नबज्दै ओछ्यान छाड्छिन् । ‘म उज्यालोमा निदाउन सक्दिनँ,’ इन्दिरा भन्छिन्– ‘त्यसैले बिहान झ्यालमा उज्यालो आएपछि बिउँझन्छु ।’ उठ्नासाथ चार गिलासजति पानी पिउने बानी छ । बिहानको केही समय संगीत साधनामा लगाउँछिन् । सामसुङको ग्यालेक्सी नोट–थ्रीमा कुनै धुन ट्युन गर्छिन् र त्यसमा लय मिलाउँछिन् । केही बेर उनको कण्ठवाट ‘ओम’ को ध्वनि गुञ्जन्छ । यतिबेलासम्म इन्दिराको अगाडि ब्रेकफास्ट र मिल्क टी तयार भैसकेको हुन्छ । अक्सर ब्रेकफास्टमा ब्रेड, फ्राइ वा उसिनेको अन्डा बन्छ । ब्रेकफास्ट पछि उनको चलायमान दैनिकी प्रारम्भ हुन्छ ।
इन्दिरा प्राय: ११ बजे घरबाट बाहिरिन्छन् । काठमाडौं आसपासमा काम छ भने आफ्नै गाडीमा हुइँकिन्छिन् । दुई वर्षयता उनी स्कोडाको फाबिया चढ्न थालेकी छिन् । उनी स्वयं ड्राइभ भने गर्दिनन् । ‘जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ पार्किङ गर्ने ठाउँ नहुने र अर्कै ठाउँमा लानुपर्ने भएकाले ड्राइभर राखेकी छु’ इन्दिरा भन्छिन् । घरबाट निस्किएपछि उनको गन्तव्य हुन्छ– जमलस्थित डोरेमी संगीत पाठशाला । डोरेमीमा सहपाठी एवं सांगीतिक गुरुहरूसँग भलाकुसारी हुन्छ । इन्दिराले यहीं संगीत सिकेकी हुन् । त्यसबाहेक उनी कुनै पनि बेला कुनै पनि रेकर्डिङ स्टुडियो पुग्न सक्छिन्, त्यसको खासै टुंगो हुँदैन । फोटोसुट तथा अन्तर्वार्ताले पनि उनलाई व्यस्त बनाउँछ । एक बजेपछि उनी घर फर्कन्छिन्, खाना खान । विगतमा बाहिर रेस्टुराँकै खानाले उनको पेट भरिन्थ्यो । अहिले त्यस्ता खानाले पेट भरिए पनि मन भरिँदैन । त्यसैले खानाका लागि घर पुग्नैपर्छ । आफ्नै भान्सामा पाकेको खान्कीले मात्र उनलाई सन्तुष्ट तुल्याउँछ । खानपानपछि इन्दिरा फेरि घर बाहिर निस्कछिन् ।
मध्यान्हतिर उनलाई लाजिम्पाटको फ्राइडे क्याफेमा भेट्न सकिन्छ । अन्तर्वार्ता, भेटघाट तथा फोटोसुटका लागि फ्राइडे क्याफे नै बढी सहज लाग्छ । ‘त्यहाँ म अलि फ्रेस महसुस गर्छु’ इन्दिरा भन्छिन्– ‘त्यसैले दिनभरको काम सकेसम्म त्यहीं बसेर पूरा गर्छु ।’ इन्दिरा ६–७ बजेभित्र घर फर्कन्छन् । त्यसपछि उनी मनतातो पानीले नुहाउँछिन् । फ्रेस भैसकेपछि रातको खाना खाने बेला हुन्छ । यतिबेला घरका सबै सदस्य भेला भएर रमाइलो गर्दै खाने चलन छ । खानामा आटाको रोटी, तरकारी, दाल र अचार हुन्छ । ‘रातको खानामा एक–अर्कालाई पर्खेर भए पनि सबै सँगै बस्छौं,’ इन्दिरा भन्छिन् । डिनर र सुत्ने समयको ग्याप कम्तीमा तीन घण्टाको हुन्छ । ‘खाना खानासाथ सुत्दैनौं,’ उनी भन्छिन्– ‘स्वास्थ्यका लागि पनि हामी तीन घण्टाको ग्याप राखेर खान्छौं ।’
खानापछि सबै आ–आफ्नै दुनियाँमा भुलिन्छन् । कोही टेलिभिजन हेर्छन्, कोही गफगाफमा व्यस्त हुन्छन् । इन्दिराचाहिँ फेसबुक अपडेट गर्छिन् । उनीसँग ग्यालेक्सी नोट थ्री, आइप्याड र म्याकबुक इयर छ । इन्दिरा त्यति टेलिभिजन हेर्दिनन् । चलचित्र हेरेर वा संगीत सुनेर भने उनको धीत मर्दैन । पुस्तक पढ्ने पारिवारिक संस्कार नै छ । ‘घरका सबै जना पुस्तक क्रेजी छन्,’ इन्दिरा भन्छिन्– ‘त्यसैले म पनि पुस्तकहरू पढिरहेकी हुन्छु ।’ १० बजेभित्र उनी ओछ्यानमा पुगिसकेकी हुन्छिन् ।
प्रकाशित: आश्विन ८, २०७२
« Reply #3 on: November 02, 2015, 11:56:09 PM »
« Reply #4 on: November 08, 2015, 08:53:23 AM »